Ozi N'ezie adia ụwa na nchekwa ngwaọrụ ndidi na etiti ogbo nke a evolushọn. Ndị kasị ewu ewu mpụga nchekwa na ngwaọrụ ka nwetara na-SD kaadị maka ya iji n'etiti ọtụtụ nde mmadụ gafee n'ụwa. E nweghị n'enweghị obi abụọ na ngwaọrụ bụ jụụ iji ma ka ị ga-kwuru site ugbu a na SD kaadị nwere ike ida ị mkpa data nke nwere ike ime ka ị na-eje ije a uko eriri. Otú o sina dị data mgbake software mere ka ndụ a bit mfe n'ihi na ndị na-ahụ onwe ha scratching isi ha maka adịkwa mkpa faịlụ.
Ọdịdị nke data na i nwere ike naghachi ike ịdị iche site akwụkwọ, ihe oyiyi, ọdịyo faịlụ, video faịlụ, ozi ịntanetị, archived faịlụ n'etiti ndị ọzọ-na-ekwu ihe atụ na i furu efu foto gị na ị ga-achọ agbake azụ gị SD kaadị. E nwere ọtụtụ ngwá ọrụ n'ihi na windo ma ọ bụ Mac kọmputa ị nwere ike ịga n'ihi na ma ụfọdụ ndị kasị mma na-agụnye:
N'ebe a, anyị na-anya na otú ị pụrụ naghachi gị faịlụ site na iji abụọ ịtụnanya ngwaọrụ maara dị ka Wondershare Photo mgbake software na Wondershare Data-nnaputa nile na otu ngwọta ngwá ọrụ.
1. Iji Wondershare Photo Recovery Ngwá Ọrụ
N'ịkọwa Wondershare foto mgbake ngwá ọrụ dị ka ịtụnanya bụ n'ezie ihe ekwesighi ma ọ bụrụ na ị na-ele nso nke atụmatụ a software awade ọrụ. The software nwere oké ọrụ interface na mîdaha ọkachamara mode Usoro naghachi foto gị. The kasị adọrọ mmasị akụkụ nke software bụ na ị ga-mkpa atọ nzọụkwụ nnoo iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị kama nza nke mgbagwoju anya nzọụkwụ na e ji mara nke ọtụtụ softwares. The software ga-agbake videos, nke bụ a gbakwunyere bụrụ na ị na mkpa naghachi videos dị ka mma. The software na-enye ohere ọrụ ịmaliteghachi enyocha kwa si ​​aga n'anya, nke na-azọpụta oge. Ugbu a na ị maara ihe bụ ihe na-echere na ngwá ọrụ a. Ọ bụ oge na-ahụ otú i nwere ike naghachi foto gị na atọ mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Nwụnye na launching
Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata ngwá ọrụ site n'ịhọrọ OS ị na-agba. E nwere ihe abụọ nhọrọ, iji a Mac ma ọ bụ a Windows kọmputa maka mgbake. Ozugbo i arụnyere, ẹkedori ngwa na ị na-agbụ na-ahụ ihe interface na-enye gị ntụziaka na-eso. Cheta na-efego kaadị na ajụjụ iji kpọmkwem iji a ebe nchekwa mkpisi ma ọ bụ i nwere ike iji a ekwentị, na eriri USB n'ihi na nke a (NB kaadị ga-ndokwasa na anya dị ka otu n'ime draịva n'ihi na ị na-aga nke ọma naghachi gị photos). Ị nwere ike wee pịa na mmalite na ala n'akụkụ aka nri nke window na-amalite mgbake usoro.
Nzọụkwụ 2: Họrọ SD kaadị na iṅomi
Ọ bụrụ na kaadị n'ụzọ kwesịrị ekwesị ndokwasa, ọ ga-egosi na ụzọ n'akụkụ ndị ọzọ draịva na kọmputa gị.
Họrọ SD kaadị na pịa iṅomi na menu mmanya nke software window. The software-enye gị ohere kwụsịtụ Doppler ma ọ na-atụ aro ka ị ka na Doppler zuru ezu n'ihi na mma na ya pụta.
Nzọụkwụ 3: Naghachi na Zọpụta Files
Nzọụkwụ ọzọ bụ na-agbake faịlụ. The software-enye gị ohere ịhụchalụ oyiyi mere na ị pụrụ naghachi ihe ọ bụla ị chọrọ naanị. Ozugbo i họrọ faịlụ, pịa Naghachi. Ị nwere ike ịhọrọ ebe na-azọpụta faịlụ-natara.
Họrọ a ndekọ dị iche iche n'ebe onye nke jere ozi dị ka isi iyi site na ịpị New nchekwa. Ị dị mma na-aga.
2. Iji Wondershare Data Recovery Software
Na-esote software ị na-arụ ọrụ nke ọma bụ Wondershare data mgbake software. Nke a bụ ihe nile na otu ngwá ọrụ na-ike naputa ọ bụla ụdị faịlụ maka gị. Ma ị furu efu a akwụkwọ faịlụ, Archive faịlụ, email faịlụ, video faịlụ, ọdịyo faịlụ, image faịlụ ma ọ bụ ihe ọ bụla faịlụ, - nke a bụ ngwá ọrụ na-bụ a Jack niile trades. The software e mepụtara aka ọrụ nke dị iche iche larịị nke oru nka ma ọ bụ nanị tinye, ị nwere ike iji ya ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na kọmputa ụwa. Ọzọ, na-eji ya na-agbake foto gị na-ewe 3 mfe nzọụkwụ.
On launching, ị nwere ike naghachi gị faịlụ, site na-ahọpụta Lost File Iweghachite nhọrọ.
Nzọụkwụ 2: Họrọ Ụzọ na ike iṅomi ndị SD Kaadị
Ozugbo ị họrọ nhọrọ n'elu na ị ga-kpaliri họrọ ụzọ ebe gị SD kaadị
odude. Mgbe na-ahọpụta ụzọ, pịa iṅomi ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na Mac ma ọ bụ na-amalite ma ọ bụrụ na ị na-agba a windows PC, Jide n'aka na ị ego nhọrọ Kwado Deep iṅomi.
Nzọụkwụ 3: ịhụchalụ foto gị na-agbapụta ha
The ikpeazụ nzọụkwụ bụ ka ịhụchalụ nke furu efu, scanned photos dị ka ị họrọ ndị gị mkpa azụ na SD kaadị. Mgbe na-eme otú ị ga-mkpa pịa Naghachi.
Abụọ ndị a ngwaọrụ ga colossal foto gị mgbake mgbe ọ bụla ị rụrụ foto site na SD kaadị karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye photographer ma ọ bụ kwuo na ị furu efu mkpa photos. Ọ bụ nke kachasi mkpa ka a mata ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị SD kaadị na ike ga-eji na-echekwa data. E nwere ọtụtụ ụdị nke SD kaadị ma anọ n'ime ha bụ ndị nkịtị na ahịa.
Ha niile na-abịa dị iche iche ebe nchekwa nkọwa dabere na onye ọrụ mmasị. Ha na-ọma karịa ndị ọzọ na ịgụ na ide ọsọ ma na zipụta ha n'usoro na random ndapụta. Ha na-mara mara mma inogide karịa ọtụtụ ndị ọzọ na ahịa.
Ọ bụ oge na-awụlikwa elu ụgbọala ahụ na-enwe Ịchekwa foto na SD kaadị-enweghị atụ egwu na-atọpụ ihe ị deem mkpa. Mgbe niile, e nwere nnọọ ezi data mgbake software ngwá ọrụ ị nwere ike nke.
Olee otú iji Hichapụ Kuki si gị Favorite Web Nchọgharị
> Resource> Naghachi> 2 ụzọ naghachi SD kaadị na PC / Mac ọsọ ọsọ na mfe